अमेरिकामा ३० वर्षयताकै माथि पुग्यो ब्याजदर, विश्वभर के पर्ला असर ? - Vishwanews.com
अमेरिकामा ३० वर्षयताकै माथि पुग्यो ब्याजदर, विश्वभर के पर्ला असर ?
काठमाडौं (बीबीसी) । अमेरिकी केन्द्रीय ब्याङ्कले बढ्दो उपभोक्ता मूल्यमा लगाम लगाउने आफ्नो कदमलाई अघि बढाउँदै झन्डै ३० वर्षयताकै सबैभन्दा ठूलो ब्याजदर वृद्धिको घोषणा गरेको छ। फेडरल रिजर्भले आफ्नो मुख्य ब्याजदरलाई प्रतिशत बिन्दुको तीन चौथाइका दरले वृद्धि गर्दै १।५ प्रतिशतदेखि १।७५ प्रतिशतको दायरामा पुर्‍याउने बताएको छ। गत महिना अप्रत्याशित रूपमा अमेरिकामा मुद्रास्फीति बढेपछि मार्च यताको यो तेस्रो यस्तो वृद्धि हो। योसँगै अर्थतन्त्रले सामना गरिरहेको अनिश्चितता थप बढ्ने ठानिएको छ।
बैठकपछि जारी गरिएको प्रक्षेपणले केन्द्रीय ब्याङ्कले ब्याङ्कहरूले सापटी लिँदा लिने शुल्कको दर वर्षको अन्त्यसम्ममा ३।४ पुग्न सक्ने अपेक्षा अधिकारीहरूले गरेको देखाएको छ। यो कदमका कारण धितोबन्धक, क्रेडिट कार्ड र अन्य ऋणका लागि सर्वसाधारणले उच्च लागतको सामाना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। विश्वभरका केन्द्रीय ब्याङ्हरूले यस्तै खाले कदम चाल्नसक्छन् र त्यसले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ। फेडरल रिजर्भका अध्यक्षले मुद्रास्फीतिलाई अस्वाभाविक भनेका छन् ।
त्यसले वर्षौँका लागि न्यून लागतको कर्जा र सापटीको फाइदा लिएका व्यवसाय र घरपरिवारहरूलाई प्रभावित पार्नसक्छ। एउटा रणनीतिक परामर्शदातृ संस्था ईवाई(पार्थेनन्‌का प्रमुख अर्थशास्त्री ग्रेगरी डाकोले भने, ‘अधिकांश उच्च अर्थतन्त्र भएका देशहरूका केन्द्रीय ब्याङ्क र केही उदीयमान बजारका केन्द्रीय ब्याङ्कले आफूलाई पनि अनुकूल बनाउने नीतिहरू कडा पार्दैछन्।’
एप्रिलमा उपभोक्ता मूल्य ९ प्रतिशत बढेको यूकेमा ब्याङ्क अफ इङ्गल्यान्डले बिहीवार डिसेम्बरदेखि आफ्नो आधार दरलाई सन् २००९ पछि पहिलो पटक एक प्रतिशतभन्दा माथि धकेल्दै पाँचौँ वृद्धिको घोषणा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। ब्राजिल, क्यानाडा र अस्ट्रिलियाले पनि ब्याजदर बढाएका छन्। युरोपेली केन्द्रीय ब्याङ्कले पनि यसपालिको गर्मीयामपछि त्यस्तै गर्ने योजना बनाएको छ।
सन् २०२० मा महामारीले अर्थतन्त्रलाई पारेको प्रभावसँग जुझ्नका लागि अमेरिकामा केन्द्रीय ब्याङ्कले यस वर्षको मार्चमा ०.२५ प्रतिशत र मेमा अर्को आधा प्रतिशत बिन्दु गरी दुई पटक ब्याजदर बढाइकेको छ । त्यसबेला फेडरल रिजर्भका अध्यक्ष जेरोम पावेलले अधिकारीले तीव्र वृद्धिबारे नसोचेको बताएका थिए। तर गत शुक्रवारको तथ्याङ्कले मे महिनामा अमेरिकी मुद्रास्फीति ८.६ ले बढेको बढेको देखाएको छ। त्यो भनेको सन् १९८१ पछिको सबैभन्दा तीव्र गतिको वृद्धि हो।
त्यसले अधिकारीहरूलाई थप आक्रामक रूपमा अघि बढ्न दबाव परेको पावेलले यसै साताको बैठकपछि पत्रकारहरूलाई बताएका थिए। फेडरल ब्याङ्कले ब्याङ्कहरूले सापटी लिँदा लिने आफ्नो शुल्कको दरको दर सन् २०१९ को अवस्थामा फर्कनेछ। त्यो ऐतिहासिक मापदण्डहरूका आधारमा अपेक्षाकृत कम हो। तर वृद्धिले पहिले नै असर गरिरहेको छ। त्यसले गर्दा डलरको माग उच्च दरले बढाउन मद्दत गरेको छ। वर्षको सुरुवातयत उक्त मुद्रा १० प्रतिशत माथि पुगेको छ र विशेषगरी उदीयमान बजारलाई डलरमा ठूलो मात्रामा ऋणको दबाबमा परेको छ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले मुद्रास्फीति र डलरको मूल्य वृद्धिले उनीहरूको नाफामा असर गरिरहेको चेतावनी दिएका कारण अमेरिकाका सयौँ ठूला कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था ओरालो लागेको बताइएको छ। पेट्रोलको बढ्दो लागतका कारण मानिसहरूले कारजस्ता सामानको खरीद स्थगित भएका कारण त्यस्तो हुन गएको हो। पावेलले मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न आर्थिक स्थायित्वका लागि आवश्यक रहेको र त्यस्तो प्रगतिका लागि समय लाग्ने बताए ।